Adigu haka harin Tareenka.( Cashar muhim ah). – War La Helaa Talo La Helaa Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/6/c/2/shaaciye.org/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 316
By Jabra Shaaciye	 Last updated May 21, 2019
Waa Run in Islaamku Yurub Qabsanayo, Xaqiiqda hoos ka Aqri.
Bal ila arag 4 taan Qodob, si ey kaaga baxdo Cabsida aad ka qabtid in Islaamku sii laciifayo ama laga guuleysan karo iyo in Islaamku Yurub Qabsanayo oo Xaqiiq Noqotay.
A)- Jaamacadda “Harvard University” oo la furay Sannadkii 1817dii, laguna sheego tan ugu horeyso Jaamacadaha Dalka Mareykanka & Dunida oo dhan, lehna Maktabadda Buugagta Sharciga ee Dunida ugu weyn. Ayaa Go’aansatay in ey hesho hal ku dhag Cadaalada ka hadlayo kii ugu wanaagsanaa ee weligii Beni Aadamku dhegahiisa ku maqlo, loona raadiyo si ey ugu dhajiso ilinka hore ee Jaamacadda , waxaa la baaray Taariikhihii Sharciga, Diimaha iyo Falsafadaha ee Dunida soo maray oo dhan, waxaa ugu dambeyn laga soo reebay 150 Qoraal.
Kan ugu wanaagsan ee Cadaalad ka hadlayo ayaa loo aqoonsaday Aayadda 135aad ee Suuratu Nisa ee Qur’aanka Kariimka. Waxaana lagu Dhajiyay ilinka hore ee Jaamacadda. ( F.S: 2, 3, & 4aad)
B)-Yurub iyo Islaamka
1- Markii aan yaraa ee aan Baadiyaha Joogay. waxaan heystay hal go’ kabo iyo Shaatina ma qabin. waxaan maqli jiray, Yurub Islaamka ayaa qabsanayo. Su’aal ayaan is wediin jiray, taa oo aheyd Tuuladaa yare e Islaamku qabsanayo xageey ku taal, Qabiilkee degan. Laakin ma beensan arrinkaa aan ka maqlay Culumadii Somalida ee Tuulada.
2- Markii aan fahmay Yurub, waxaan is weydiiyay Su’aal kale, Yurub oo 2ba Dowladood oo ka mid ihi ey heystaan hubka halista ah, Ciidanka NATO –na ey leeyihiin, iyo ciidamo kale side islaamku u qabsanayaa?.
3- Waan ogaaday in ey sax tahay, oo iyagii ayaaba qiray 20 Sanno ka hor, in Islaamku qabsanayo. Kadib markii Dadkii Muslimiinta ahaa ey Guryahoodii ka soo qixiyeen, ayaa Islaamkiina soo degeen Guryahii reer Yurub. kadibna Baadarigii ugu weynaa Masiixiyadu ku qeeyliyay waa nala qabsaday, qorshaha ey dageen qadarka Alle ayaa ka weyn.
4- Cilmi baaris ey sameeyeen Reer Yurub ayaa leh: Dhalashada dadka oo ku yar Reer Yurub iyo qoyska Islaamka oo aad u Tarmayo ayaa sabab u ah in islaamku na Qabsado.
5- Ummada tarankeedu ka yaraado celcelis ahaan 2-3 Caruura qoyskiiba, wey baaba’daa, haddana Yurub taranku waa.1.3 Caruur ah. guud ahaa dadka Yurub ku nool ma yaraanayaan, waxaase yaraanaya Dadkii Asalka ahaa ee Reer Yurub, laga soo bilaabo 1990 taranka yurub ee batay 90% waa qaxooti. ( F.S: 5 & 6aad)
6- Cilmi baristaa ayaa Tusaale u soo qaadatay Dalka faransiiska. Qoyska Faransiiskaa tarankiisu waxa uu kordhaa 1.8, halka Qoyska Muslimka ah ee Farnsa joogo uu kordho 8.2. koofurta Faransa oo dhaqan ahaan lagu yaqiin Kaniisado badan ,hadda waxaa ku badan Masaajidda, 1000 Masjid oo ka mid ah. Badankoodu hore Kaniisado ayey u ahaayeen, Muslimiinta ayaana dhulkii iibsatay. Daraasadda ayaa leh: Yurub Dadka Da’doodu ka yartahay 20 Sanno 30% ka mid ah waa waxa ey ka tirsan yihiin Qoys muslima. Magaalooyinka waaweyn sida Paris, waxa ey gaareen 45%. Sannadka 2027 Dalka Farnsa 5tii Caruur ah ee ku dhalatana mid ayaa muslim noqon doono, 39 Sanno kadibna Faransa waxa ey noqonee Dal Muslim ah oo ey ku bataan Muslimiinta u soo haajirtay iyo Farnsiiska islaamay.
7- Daraasadda ayaa leh: Dalka Holland, 50% caruurta ku dhalato waa Muslim, 15 Sanno kadibna Dadka Reer Holland Barkood waxa ey u dhawdahay in ey Muslimiin yihiin.
8- Dalka Ruushka waxaa ku nool in ka badan 23 Million Ruux oo Muslimiin ah, 5tii Qof ee Ruush ahna hal ayaa Muslim ah. Sannada yar kadibna Ciidanka Ruushka 40% waxa ey yihiin Muslim.
9- Daraasadda ayey ku qoran tahay in Dalka Bilgimka Dadkiisu 25% ey yihiin Muslim, Caruurta dhalatana 50% ayaa u dhasha qoys muslim ah. Dowlada Bilgim oo ah Xarunta Midowga Yurub ayaa tiri: Sannadka 2025 haddii lagaaro ilmaha Yurub ku dhasho 1/3 waxa ey noqonayaan Muslim, Dhibaatadaa ha laga hor tago.
10- Dowladda Jarmalka ayaa ka digtay khatar yurub ku soo socoto oo tiri: Hoos u dhaca Dadka Jarmalka lagama hor tagi karo, Dalkuna Sannadka 2050 waxa uu noqonayaa Dal Muslim ah, Jarmalka ayaa yiri: waqtigii Daraasada la sameynayay, hadda Yurub waxaa ku nool 52 Million oo Muslimiin ah , laakin 20 Sanno kadib waa laba laab mayaan waxa eyna noqonayaan 104 Million oo Muslimiin ah.
11- Kanada sannadihii u dhexeeyay 2001-2006 Dadkeedu waxa ey kordheen 1.6 laakin 1.2 ka mid ahi waxa ey ahaayeen Qaxooti.
12- Mareeykanka Sannadkii 1970kii waxaa ku noolaa 100.000 oo Muslimiin ah Halka Sannadkii 2008 ay ku noolaayeen 9 Million oo Muslimiina ah, 30 Sanno kadibna waxa ey gaarayaan 50 Million oo ah Muslimiin.
13- Ingriiska 30 kii sanno oo u dambeysay Muslimiintu waxa ey kordheen 82.000 illaa 2.5 Million. Waxa eyna leeyihiin Islaamku waxa uu noqon doonaa Diinta dadka aaminsani ey ugu badan yihiin Caalamka.
14-FG: Anniga oo aan kuu faaneyn oo dar Alla u hadlayo, Yurub markii ey ka baqday hoos u dhaca dhaqaale ee Caalamiga ah, kheyraadkiina uu ku yaraanayo Aduunka, Dadkii oo badanayo, Nabadgalyadiina ey xumaatay ayaa waxaa la Diyaariyay Miisaaniyad dhan EUR 80 Billion ( Not Million) oo lagu sameeyo Cilmi baaristii ugu weyneyd ee Yurub ey si wada jir ah u maal galiso, looguna tala galay sidii yurub loo badbaadin lahaa Cilmi baaristaa oo soconeyso 2014-2020, loona yaqiin Cilmi Baaristii “ Horizon 2020”. Waxa soo dalbaday Shakhsiyaad Khubaro ah iyo Macallimiin jaamucadeed oo gaarayo 30.000 khabiir, waxana la rabay 1000 Qof oo kaliya ayaa la rabaa, koox koox ayaa la isku raaciyay, koox kastana 1 sanno ayey ka shaqeeynee Moowluuc gooni ah, Anigu ma dalban, haddana waxaa la igu daray 1000kii qof ee la xulay oo Saddex Saddex ayaa la isku raaciyay, waxaana aan isku koox aheyn Haweeney Kanadian ah iyo Nin Norwey ah halkii sanno, Labaduba waxa ey ahaayeen Macallimiin Jaamacadeed. Intii mashruucaa aan ka shaqeeynayay weliba aniga oo Xamar ku shaqeynayay, waxaan dareemay in Yurub ey cabsi dareentay, laakin wadamadii Muslimka iyo Dalkeyguba in eynan ka fikireeyn mustaqbalka jiilasha dambe, iyada oo loo heli karo dad badan oo Lacag la’aan ugu shaqeeyo, oo aan anniga iyo kuwa iga aqoon badani aan kow ka nahay. ( cadeynihii Contractigeyga weli waan hayaa, haddii aadan iga aamineeyn, Faahfaahinta mashruucana Google ka raadi)… waxaa ii cadaatay in yurub uu Islaamku qabsan doono isaga oo aanan ku dagaal ku qaadin, Hadalkii Culimada islaamka aan ka maqli jirayna uu rumoobi doono,.
C) Bible-ka Ciddi ma xafido.
1-Horaa loo yiri: Haddii dhamaan kitaabta Bible-ka Masiixiyiinta ee Aduunka yaal la soo ururiyo, baraha Bulshadana laga soo tirtiro, oo dhamaan hal Sanduuq lagu rido, kadibna badweynta gunteeda la dhigo, dib dambe loo arki maayo kitaab Bible ah oo daabacan, ileeyn ma jirto cid karka ka xafidsan oo akhrin karto.
2- haddii Kitaabka Qur’aanka Aduunka oo dhan laga soo ururiyo, Baraha bulshadana laga soo tirtiro, oo dhamaan hal sanduuq lagu rido lana dhigo Badda gunteeda , subaxa xigo waxaa la arkayaa, kitaab Quraan oo daabacan, ileeyn Dad badan oo Malaayiin ah oo dusha ka xadidsan ayaa joogo Ruushka, Mareykanka, Yurub , Afrika iyo Aasiya. shanta qaaradood isku mar ayaa lagu daabacayaa.( F.S:7-10aad)
D) Daabacaada Qur’aanka & Bible-ka.
1- Horaa loo yiri: kitaabka ugu badan ee Aduunka la daabaco waa Bible-ka, lacagta ugu badan ayaana ku baxdo daabacaadiisa, Hoteladu badanaa qolalkooda waa la dhigaan, meela bandanna waa loo qeeybiyaa, inta badana ma jiro qof wada Aqriyo.
2- Laakin inta la daabaco kutub aduunka ,ha noqdeen kuwa Cilmi ah, siyaasad, joornaal. Kitaabka loogu Aqriska badan yahay Aduunka oo dhan waa Kitaabka qur’aanka, ilbriqsi kasta aduunka meela ka mid ah ayaa Dad badani ku aqrinayaan. ( F.S: 11-15aad).
Allaah ayaa yiri: “Annagaa soo dejinay Annagaana Xafideeyno” . Annaga hala yaabin, Allah waa kaligii Ciddi lama soo Dajin ee ( Nuunka –“Naxnu ” Annaga) waa Nuunu tacdiim, weeyneeyn Allaha weyn ee kaligii ah.
Islaamku waa soconayaa, Gaalana ma hor istaagi karto, haddey isku tagaana Mid la mid ah ma keeni karaan.( F.S: 16aad)
Islaamku aad ayuu ugu Fidayaa hadda Meela badan oo Afrika ah, Yurub & meela badan oo Dunida ka mid ahna waxaa Qabsan doono Islaamka, Sida hore naloogu sheegay iyo sida lagu ogaaday Cilmi baarisyo badan oo la sameeyay, Afkoodana ey ku qirteen. Adigu haka harin tariinka Islaamku waa socdaahe.
60738714 2790207577687624 1583420185652494336 N
DHAGEYSO: M/weyne Deni oo amarkii ugu cuslaa siiyay Booliska Gobolka Mudug